Muqdisho(SONNA) Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa booqday isbitaalka Madiina si uu tacsida iyo dhibaatadii dhacday ula qaybsado shacabka Soomaaliyeed.
Markii uu gaaray Isbitaalka Madiina waxa uu warbixin ka dhageystay maamulka Isbitaalka Madiina Dr Maxamed Yuusuf ka dib wuxuu socod ku maray qeybaha isbitalka uu ka kooban yahay,isagoo u kuur galayay dhimashada iyo dhaawaca shacabka soo gaaray.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa shacabka ku dhaqan caasimadda ugu baaqey in ay ka dhiidhiyaan dhibaatooyinka iyo gumaadka ay ku hayaan maleeshiyada Shabaab bulshada.
“Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi Ayaa ayaa yiri”Waxaan uga tacsiyeynayaan shacabka Soomaaliyeed dadkii ku dhintay mashaqadii dhacday,Arintani waa mid aan loo dulqaadan Karin,waxaan ugu baaqayaa shacabku in ay kala shaqeeyaan laamaha ammaanka sidii looga hortagi lahaa dhagaraha Shabaab.
Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa gaaraya boqolaal,waxaana weli meydad la garan la’yahay ay yaaliin isbitaalada magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku booqdeen mas’uuliyiin kaladuwan oo katirsan Dowladda Soomaaliya,inta badan waxaa lagu guuleystay in nadaafad laga waday goobtii mashaqadu ay ka dhacday,waxaana jirta in dad nool oo dhismayaal ay ku soo dumeen laga heley halkaasi.